Tamar shidaal ah Si aad uhogal ah u baahan tahay tuubiste, koronto yaqaan ama dhismaha ku yaal Cornwall?
Dhismaha, Biyaha iyo Adeegyada Korantada
Home > Dhismaha, Biyaha iyo Adeegyada Korantada
Waxaan ognahay in dhismaha badanaa uu yimaado qayb ahaan iyo jagada a kululaynta,hagaajinta kuleyliyahaama tamarta la cusboonaysiin karorakibidda.
Rakibaadda ayaa sidoo kale noqon karta wakhti aad u fiican si aad u hesho horumarin dheeraad ah oo lagu sameeyo gurigaaga. Kooxdayada khibraduhu waxay bixin karaan qalab dhamaystiran oo shaqooyin ah si loo hubiyo in shaqooyinka loo baahan yahay marka lagu daro rakibid lagu dhammeeyo wadajir iyo heer sare. The Tamarta Maalgelinta dalab kooxeed shaqooyinka korantada, shaqooyinka dayactirka, musqusha iyo qalabka jikada.
Hawlaha Hagaajinta Guriga
Kooxdayadu waxay diyaar u yihiin inay kula hadlaan oo ay kugula taliyaan shaqooyinka dhismahaaga. Waxaan u soo bandhigi karnaa dhamaadka si loo dhammeeyo adeegga milkiilayaasha guriga iyo milkiilayaasha guriga oo ay ka mid yihiin:
Nadaafadda, naqaska iyo qaybaha
Qalabka jikada iyo musqusha
Decking, dabaasha, qoryaha iyo daaqadaha
Qoorta iyo darbiyada
Fascias iyo qadarin
Waxaan u qalmin koronto yaqaan waxay kaa caawin doonaan wax kasta oo ka soo baxaya marinka cusub si aad u buuxisid guriga dib loo duubo. Waxaan sidoo kale ku rakibnaa nalka dibedda iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda ugu dambeysa ee LED.
Kondensation waxay dhalin kartaa caaryo taas oo sababi karta dhibaatooyin caafimaad dadka qaba dhibaatooyinka neefsiga sida Neefta. Waxaan ku rakibi karnaa dhammaan qalabka hawo siinta guriga oo yareynaya heerarka qoyaanka ee guriga, ka saar qaybaha hawada ka baxa iyo hoos u dhig heerka qashinka caarada.
Mulkiilaha Guriyeynta & Safarka
Haddii aad leedahay hanti dheeraad ah ama fasaxyada fasaxyada Maxaad ka faa'iideysan kartaa noo Adeegyada Milkiilaha iyo Safarka Safarka. Waxaanu soo bandhignaa shaqooyin qorsheysan oo wax ku ool ah oo ay ku
Wareegidda iyo wacitaanka korantada
Kusoo kicinta musqusha iyo musqusha
CP12 shahaadooyinka badbaadada gaaska
Shahaadooyinka Waxqabadka Tamarta
Si aad u ogaato sida aan kuu caawin karno mashruucaaga
nala soo wac hadda
Waxa kale oo aad xiiseyn kartaa: hagaajinta kuleyliyaha iyo tamarta la cusboonaysiin karo adeegyada.